Netflix wuxuu yeelan doonaa kaniisada SiriusXM gaar ahaan Isniinta - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Netflix wuxuu yeelan doonaa kaniisada SiriusXM gaar ahaan Isniinta - BGR
Netflix wuxuu yeelan doonaa kaniisada SiriusXM gaar ahaan Isniinta - BGR
Netflix ku dhawaaqday maanta heshiis rasmi ah in dadweynaha ee shirkadda kale warbaahinta ku soo dejin doonaa Streaming ah content Rafaa by Times, furitaanka outlet ah in Netflix dhex-dhexaad cusub: radio.
Netflix iyo SiriusXM ayaa isku darsaday. Netflix waa joornaalka joogtada ah ee Joke kaas oo si gaar ah loogu baahin doono SiriusXM waxaana laga sii deyn doonaa kanaalka 93 ee adeegga raadiyaha. Netflix waxay dabcan horumar ka gaartay sanadihii a
Waxaa laga bilaabi doonaa on 15 April oo aad dhegaysan kartaa qalabka Netflix ah qof walba isbuucaan Adam Sandler in Aziz Ansari, Chris Rock, Jerry Seinfeld, Ricky Gervais, Sarah Silverman oo dheeraad ah. Iyo marka lagu daro baahin doodii tayo comedy gaar ah u xaqiijiyay, channel cusub baahin doonaa waxyaabaha ka soo barnaamijyada mustaqbalka gaar ah ka go'an in ay istaagaan-up oo hore u bilaabi doonaa channel this, bixiya macaamiishu SiriusXM dhagaysan kartaa nuxur cusub ka hor inta aan xitaa la socon Netflix. 19659003] Intaa waxaa dheer, Netflix waa kaftan ayaa soo bandhigi doona sheekooyinka ka soo baxa munaasabadda hadalheynta sheekada iyo sheekooyinka kale ee joornaalada. " Netflix waa raadiye kaftanka on SiriusXM wuxuu noqon doonaa faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan majaajilada tartanka abaalmarinta abaalmarinta ee Netflix ", ayuu yiri Ted Sarandos, oo ah agaasimaha content ee Netflix Bayaan. Waa ugu yaraan waayo-aragnimo xiiso leh oo ku saabsan qaybta shirkaddiisa.
Dhaqdhaqaaqa ayaa weli ah mid ka mid ah jilayaasha, haddii aysan ahayn, ciyaartoyda ugu muhiimsan ee ku jira dagaalkii fiidiyowga ee fiidiyowga waqti aan dhulku marna jabin - ama tartan. . Shirkadda sii wadaan in ay kordhiso kharashka iyo aqbasho bixinta lacagaha negative dheefay xaggeeda, in socoto la balaayiin doolar ku bixisay on amro taxane telefishan cusub oo filimo cusub, marka lagu daro licensing ee qaybta saddexaad. Tani Idaacada cusub ayaa loo arki karaa sida nooc ka mid ah gaadiidka marketing inay ka adeegaan, oo wajihi doona tartan cusub ka Apple iyo Disney, gaar ahaan, iyo dalab cusub inay u yimaadaan Streaming videos.
Ku saabsan raadiyaha cusub ee Netflix channel, wargeyska maanta ayaa sidoo kale muujinaya in channelku ku jiri doono bandhig asal ah. Bandhig muuqaal ah oo marti caan ah iyo majaajileystayaal kala hadlaya dhaqanka dadweynaha iyo wararka ugu sarreeya maalinlaha, dhammaantood waxay ku qoran yihiin xarumaha SiriusXM ee Los Angeles.
Raadiyaha ugu dambeeyay ee "Disney's Trailer" ee "The Lion King" ayaa ina soo kordhaya - BGR
Waxay noqon doontaa mid aad u xanuun badan si loo arko haddii taasi ka soo baxdo goobaha bini-aadanka waa dhab - BGR
Kuuriyada Waqooyi ee Waqooyiga Kuuriya: Kim Jong-un, Com
Europa League: Arsenal oo ku biirtay kooxda Chelsea
Dhiig karka iyo kaadida ayaa laga helay aabihii hore ee 42 000
Miisaaniyadda: 2019 dakhliyada "100 African African Start-ups" oo lagu maal-galinayo "waxay xaqiijinaysaa hanaanka ganacsi ee Afrika
Morocco: Kordhinta mushaharka shaqaalaha rayidka ah ayaa laga yaabaa inay ku kacdo bilyan Milyan dirhams - JeuneAfrique.com
DADKA & LIFESTYLE3,080